हेर्नुहोस् आज ३ गते कार्तिक सोमबार, तपाईको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ? - Financial Notices
कार्तिक १३,२०७७ / ०७ : ४६
हेर्नुहोस् आज ३ गते कार्तिक सोमबार, तपाईको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ?
आर्थिक राशिफलः ३ गते कार्तिक २०७७ (सोमबार)
मेषः खर्च बढ्न सक्ने र प्रतिस्पर्धीले काममा रोकावट।
वृषः आफन्त वा साथीभाईको सहयोगले काम बन्न सक्ने।
मिथुनः राम्रो लाभ हुने कामतिर लगानीको सम्भावना।
कर्कटः शैक्षिक वा वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्ने।
सिंहः स्वास्थ्यमा समस्या हुनाले धन खर्च हुन सक्ने।
कन्याः कामले मान–सम्मान बढ्न सक्ने।
तुलाः काममा प्रगति र आम्दानी क्षेत्र बलियो हुन सक्नेछ।
वृश्चिकः कामबाट सन्तुष्टि, उपहार वा आकस्मिक धनको प्राप्ति।
धनुः अनावश्यक खर्च बढ्ने र काममा रोकावट।
मकरः आम्दानीको नयाँ बाटो मिल्ने र व्यापारबाट पर्याप्त लाभ।
कुम्भः काम पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना छ।
मीनः यात्राबाट लाभ मिल्न सक्नेछ।